Amanqaku okuSuswa aSetyenziselwa ukukhutshwa kweNkampani
Umbutho okanye i-LLC kufuneka ifayishe izatifikethi okanye amanqaku angokuchithwa kombuso ngenjongo yokuphelisa ubukho benkampani. Inkampani ezihlanganiswe ziya kukunceda ekugcwaliseni la maphepha nakweyiphi na imimandla ye-50 nakwezinye iindawo zangaphandle.
Thengisa iZiko lakho / iNkampani
Ngamanye amaxesha ubukho beshishini lakho bunokusetyenziswa ngabantu abajonge ukufaka inkampani endala. Iinkampani eziNgenisiweyo zingathenga umbutho wakho kuwe ukuze zifakwe kuluhlu kulawulo lweenkampani zethu ezindala. Nxibelelana nathi namhlanje ukuze ubone ukuba uyakufanelekela na ukuthengwa ishishini lakho.